गाउँमै अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण - RuruNetwork
गाउँमै अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण
टाेपलाल अर्याल १६ बैशाख २०७६, सोमबार ०४:३१ मा प्रकाशित
टोपलाल अर्याल । रुरु नेटवर्क
गुल्मी, १६ बैशाख इस्मा गाउँपालिका ६ अम्मरपुरका टंक कुमालले दुवै आँखा देख्दैनन् । श्रीमति देवकी कुमाल र छोरा पिताम्बर पनि दृष्टिबिहिन छन् । कुमाल परिवार बर्षौदेखि पीडामै रहेको छ । आइतबार गाउँपालिकाले गाउँमै वितरण गर्ने अपाङ्ग परिचय पत्र लिन तीन जना आइपुगे । गाउँपालिका प्रमुख लक्ष्मण बिष्ट, उपप्रमुख बिमला खत्री र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चन्द्रकान्त बस्नेतले टंकलाई ‘ख’ श्रीमति देवकीलाई ‘घ’ र छोरा पिताम्बरलाई ‘ग’ वर्गको अपाङ्ग परिचय पत्र प्रदान गरे । सोहि ठाउँकी हरिकला कुमाल पनि बोल्दिनन् । हात–खुट्टाले काम गर्दैनन, आँखाले नदेखेको बर्षौ भए । उनले पनि गाउँपालिकाबाट ‘क’ बर्गको परिचय पत्र प्राप्त गरिन् । हरिकली कामीको घाँटीमा ठुलो प्वाल छ ।
पाँच बर्षअघि एक्कासी श्वासप्रश्वासमा समस्या आएपछि परिवारले हरिकलालाई उपचारको लागि भारत लगे । डाक्टरले स्वास नलीमा प्वाल पारेर उपचार गरे । डाक्टरले तीन महिनापछि पुन आउन सुझाव दिए । उनी आर्थिक अभावका कारण भारत फर्किनन् । पाँच बर्षदेखि बिस्तारामै जीवन कटाइरहेकी छन् । श्रीमान भिम बहादुर विकले बोकेरै वडा कार्यालय ल्याए । गाउँपालिकाले उनलाई ‘ख’ वर्गको परिचय पत्र प्रदान गरेको वडाध्यक्ष हिरा बहादुर जिसीले बताए । आइतबार ‘क’ बर्गका नौ, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका १६ तथा ‘घ’ वर्गका २१ जनालाई परिचय पत्र वितरण गरिएको जिसीले बताए ।
इस्मा गाउँपालिकाले पहिलो पटक वडा नं ६ को अम्मरपुरमा अपाङ्ग परिचय पत्र वितरण गरेको छ । गाउँपालिकाभरमा वडा नं ६ मा सवैभन्दा धेरै अर्थात ९७ जना अपाङ्ग व्यक्ति भएकाले सुरुवात अम्मरपुरबाटै गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चन्द्रकान्त बस्नेतले बताए ।
अघिल्ला बर्षहरुमा महिला तथा बालबालिका कार्यालयले अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण गर्ने गरेको थियो । कार्यालय खारेज भएपछि स्थानीय सरकारको काँधमा जिम्मेवारी थपिएको छ । गाउँपालिकाले अपाङ्ग परिचय पत्रसम्बन्धी कार्याबिधी २०७५ जारी गर्दै स्थानीय तहबाटै अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण सुरु गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बस्नेतले बताए । जसका कारण थुप्रै पैसा खर्च गरेर सदरमुका पुग्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ ।
पूर्ण अशक्त अपाङ्गतालाई रातो परिचय पत्र, अति अशक्त अपाङ्गलाई निलो, मध्यम अपाङ्गलाई पहेंलो र समान्य अपाङ्गता भएको व्यक्तिलार्ई सेतो परिचय पत्र वितरण गरिएको गाउँपालिकाको महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख गंगा पन्थीले बताइन् । सरकारले रातो परिचय पत्र भएकालाई दुई हजार र निलो परिचय पत्र भएकाहरुलाई छ सय मासिक समाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्दै आएको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई परिचय पत्र वितरण गर्नको लागि गाउँपालिकाले छुट्टै समिति समेत बनाएको छ । अपाङ्गगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४२ अनुसार गाउँपालिकाले ‘स्थानीय समन्वय समिति’ गठन गरेको छ । जसमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष संयोजक रहने गरी नौ सदस्यीय समितिको गठन गरिएको छ ।
गाउँपालिका प्रमुख लक्ष्मण बिष्टले अपाङ्ग व्यक्तिलाई परिचय पत्र वितरण गर्दै राज्यले दिने सेवा सुविधासहित थप जिविकोपार्जनमा टेवा पुराउने कार्यक्रम गाउँपालिकाले संचालन गर्ने बताए । उनले अहिले पनि केहि रचनात्मक कामहरु गाउँपालिकाले गरिरहेकाले अर्को बर्ष अझै व्यवस्थित गरेर जाने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । त्यस्तै स्थानीय समन्वय समिति प्रमुख तथा गाउँपालिका उपप्रमुख बिमला खत्रीले अपाङ्गहरुलाई राज्यले प्रदान गर्ने सानो भत्ताले मात्रै नपुग्ने भएकाले गाउँपालिकाबाट थप योजना र कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन् ।
अर्गलि राधाकृष्ण कृषि समूह द्वारा छैठौं बर्षिकोत्सव मनाइयो।
Breaking News: लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा बच्चा चिर्ने महिला पक्राउ:
गाउँपालिकाद्धारा २ सय बृद्धबृद्धालाई रेडियो र लठ्ठी वितरण
धर्मशाला निर्माणको सपना पूरा गर्न सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक खनाल रिडिमा
रिडिको दंगाली पौवा संकटमा।
रुरु नेटवर्क- बिशेष
स्वर्गीय पशुपति प्रसाद अमात्यको स्मृतिमा रिडिमा शोक सभाको आयोजना: दानवीर नाम बाट सम्मान गरियो
रुरु काठमाडौ महिला मन्च द्वारा रिडिका सामाजिक संस्थाहरु लाई स्वस्थ्य सामाग्री बितरण
रुरुधार्मिक सेवा सन्चार प्राली द्वारा अर्गलिका मृगौला पिडित परिवार लाई सहयोग हस्तान्तरण
रिडिका चेलीबेटिहरुले बुटवलमा गरे रक्तदान
भगवान राम र अयोध्या नेपालकै थिए भन्ने तथ्य र प्रमाण हरु:
रुरु गाउँपालिका बन्यो पूर्ण विद्यालय भर्ना गाउँपालिका।
रोजगार मन्त्रीकै निर्वाचन क्षेत्रबाट रोजगारी सुरु : ९० जनालाई एकैचोटि जागिर
धिरजको मृगौला प्रत्यारोपणको सफलताले रुरु नेटवर्कको अभियान लाई बनायो सफल।
गायक केशब ज्ञवालीको नयाँ गीत ‘गुल्मी रानिबासैमा’ सार्वजनिक (भिडियो सहित)
रिडिको बिष्णु पञ्जरमा भीषण पहिरो, मानबिय क्षति हुन बाट जोगियो, हेरौ live भिडियो सहित:
भूकम्प पीडितको रकम मेरो खातामा छैन — भवन भट्ट
गुल्मीमा बम विष्फोट, खिलध्वज पन्थी र भगत खड्का बाच्न सफल
गुल्मिको बिरवासमा माइक्रो बस दुर्घटना।
UK मा रहेका नेपालीहरु द्वारा सर्भाइकल डिस्टोनिया पिडित अर्जुन गौतम लाई आर्थिक सहयोग
एकता र संचारका लागि रुरु नेटवर्क
RuruNetwork Pvt. Ltd. Ruru, Nepal
© रुरु नेटवर्क प्रा. लि.द्वारा प्रकाशित/सर्बाधिकार सुरक्षित